Al Shabaab Oo Sheegatay Masuuliyada Dil Saakay ka Dhacay Muqdisho. – Heemaal News Network
Kooxo hubeesan ayaa saakay Degmada Wajir ee gobolka Banaadir ku dilay nin magaciisa lagu sheegay Maxamed Timacade, waxaana goobta dilku ka dhacay ka baxsaday kooxdii hubeesneyd.
Al Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada dilkan ka dhacay Degmada Wadajir, waxa ayna sheegeen Al Shabaab ninka ay dileen in uu ahaa sargaal tababare u ahaa ciidanka dowlada Soomaaliya.
Saraakiisha laamaha amaanka dowlada Soomaaliya ayaa wali ka hadlin dilkan saakay ka dhacay magaalada Muqdisho, mana jirto cid kale oo xaqiijisay ninka saakay la dilay in uu ahaa tababare ciidan.
Al Shabaab ayaa magaalada Muqdisho ka fulisa dilal qorsheesan oo loo geesto Ciidamo iyo shaqaalo katirsan dowlada Soomaaliya, waxaana inta badan baxsada dhalinyarada inta badan dilalka fuliya.
Al-shabaab Oo Sheegtay Mas’uuliyada Weerar Xalay ka Dhacay Boosaaso.
Xarrakada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerar xalay fiidkii kooxo hubeysan ku qaadeen Saldhigga Booliska ee Bartamaha Boosaaso, kaasoo ku dhow Dekeda Boosaaso. Weerarkan oo ahaa mid muddo socday ayaa la isu adeegsaday rasaas culus iyo […]
Dagaalame Ka Tirsan Alashaab Oo Isku Dhiibay Ciidanaka Dawlada Iyaga Oo Ay Eryanayaan Kuwii Uu Ka Tirsanaa
May 10, 2018 Soomaaliya
Wararka naga soo gaaraya Gobolka Gedo, ayaa sheegaya in Dagaalame ka tirsan Ururka Al-Shabaab uu isku dhiibay Ciidamada Nabad SUgida ee ku sugan Magaalada Baladxaawo. Askarigan Shabaabka ee isa soo dhiibay oo lagu Magacaabo C/llaahi […]
Alshabaab Oo Sawirro kasoo Qaaday Hadhaagii Warshadii Sonkorta Ee Mareerey.(Sawiro)
Wariyaal katirsan Warbaahinta Al Shabaab ayaa booqday sidoo kale sawiro kasoo qaaday Warshadii Sonkorta sameyn jirtay ee Mareerey oo kutaala duleedka Deegaanka Hargeysa Yarey ee gobolka Jubadda Dhaxe. Qalabka Warshada Sonkorta Mareerey ayaa u muuqda […]